चीन सीपीएलए प्लास्टिक मुक्त टिकाऊ नवीकरणीय कटलरी किट - कागज ब्याग निर्माण र कारखाना | जियान्टी
सीपीएलए प्लास्टिक मुक्त टिकाऊ नवीकरणीय कटलरी किट - कागज झोला
यस कटलरी सेटमा सीपीएलए चाकू, काँटा, चम्चा र एक रुमाल समावेश गर्दछ। तपाईको सुविधाको लागि, सेट क्राफ्ट पेपर ब्यागमा भरिएको छ। तातो डिशको साथ प्रयोगको लागि उपयुक्त छ, जुन उनीहरूलाई टेकअवे उद्देश्यहरूको लागि आदर्श बनाउँदछ। कुनै पनि कार्यक्रम वा आउटडोर जमघटको लागि प्रयोगको लागि महान!
काँट, चक्कु, चम्चा र न्यापकिनको साथ यो व्यक्तिगत रूपले लिप्याइएको कम्पोस्टेबल सीपीएलए कटलरी किट बाहिर लिने अपरेसनहरूमा उत्तम थप हो! परम्परागत, पेट्रोलियममा आधारित प्लास्टिकको भाँडाको लागि एक वैकल्पिक विकल्प, यस कटलरी किटमा काँटा, चक्कु, र चम्चा समावेश छ जुन पीएलए बाट बनेको छ, प्लान्ट-आधारित प्लास्टिक जुन नवीकरणीय स्रोतहरूको साथ गठन गरी अप्ठ्यारोमा पर्यावरणीय प्रभाव कम गर्न। तिनीहरूको प्रबलित ह्यान्डलहरूले ब्यानिंग र स्नैपिंगको गुणस्तर, एकल सेवा प्रयोग प्रदान गर्न प्रतिरोध गर्दछ। एक रुमाल पनि समावेश गरीएको छ, तपाईंको पाहुनाहरूलाई सहज रूपमा तिनीहरूको हातहरू पुछ्न वा आकस्मिक स्पिलहरू सफा गर्न अनुमति दिदै। उत्कृष्ट सरसफाइको लागि व्यक्तिगत रूपमा आवरण गरिएको, यो कटलरी किट फूड-ट्रक खाना वा टु-गो एन्ट्रीमा उत्कृष्ट साथी हो। एक नवीन, क्रिस्टलीकृत गठनको साथ, प्रत्येक कटलरीले ℃ 85 heat सम्म तातोको सामना गर्न सक्षम छ, तिनीहरूलाई तातो र चिसो दुबै खानाको साथ प्रयोगको लागि उत्कृष्ट बनाउँदछ।
हाम्रो कटलरी मुद्रणको लागि उपयुक्त छैन। झोला न्यूनतम अर्डर मात्रा २००.०० टुक्रा बाट ब्रान्ड गर्न सकिन्छ। हामी ग्राहकहरु को आवश्यकता अनुसार विभिन्न कटलरी किटहरु प्रदान गर्दछौं। तपाईं हाम्रो कुनै पनि स्टक घटकबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र वस्तुहरूको इच्छित संयोजन निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि, तपाईं info@ecogianty.com लाई सोधपुछ पठाउन सक्नुहुन्छ।
Free स्वतन्त्र रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ
वस्तु सीपीएलए inch इन्च कटलरी किट कागज ब्यागको साथ
सामग्री चाकू + फोर्क + चम्चा + रुमाल
कटलरी र .्ग सेतो, कालो, रंगीन
ब्याग सामग्री क्राफ्ट पेपर + पीएलए कोटिंग
लम्बाइ २55 मिमि
तौल चाकू g.g जी, फोर्क g.g जी, चम्चा 4.5.g ग्राम
कार्टन गणना Pac०० प्याकहरू
दफ़्ती आकार * 64 * २ * * cm 48 सेमी
NW 8.8 केजी
वस्तु कागज ब्यागको साथ सीपीएलए .5.lery इन्च कटलरी किट
तौल चाकू 3.3 जी, फोर्क 4.4 जी, चम्चा 5..5 जी
दफ़्ती आकार * 64 * २ * * cm० सेमी
NW .1.१ केजी
वस्तु कागज ब्यागको साथ सीपीएलए P इन्च कटलरी किट
लम्बाइ २0० मिमी
तौल चाकू g.g जी, फोर्क 3.5.g जी, चम्चा 3.5.g ग्राम
NW .3.k केजी
GW 8.8 केजी
अघिल्लो: सीपीएलए + बाँस प्लान्ट-आधारित कम्पोस्टेबल प्लास्टिक मुक्त नवीकरणीय inch इन्च कटलरी
अर्को: सीपीएलए प्लास्टिक मुक्त टिकाऊ नवीकरणीय कटलरी किट - कम्पोस्टेबल झोला
बायोडिग्रेडेबल कटलरी किट
कम्पोस्टेबल कटलरी किट
कम्पोस्टेबल कटलरी सेट
Cpla कटलरी किट